This section is for food, and those who are loving variety of food.
09 ก.ค. 2561 | 24,488 Views
10 Apr 2018 | 25,993 views မြန်မာတွေအတွက်တော့ သင်္ကြန်နဲ့ ပိတောက်ဆိုတာ ခွဲခြားလို့မရတဲ့ ပွဲတော်ရာသီအမှတ်တံဆိပ်လိုပါပဲ။ သင်္ကြန်မှာ ပိတောက်က မင်းသမီးလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်္ကြန်မင်းသားကြီးကတော့ “မုန့်လုံးရေပေါ်” ပါပဲ။
16 Oct 2017 | 23,742 views ပြုလုပ်ပုံလေးကလွယ်ပါတယ် ၁.အာဂါအာဂါ တံဆိပ် ၂.သကြား ၂၅ကျပ်သား ၃.နွားနို့ အုန်းနို့ ရေ ဆတူ ၁လီတာခွဲ ၄.ကျောက်ကျောမှုန့်နဲ့သကြားကို ဆတူမွှေထားပါ ၅.သဘောင်္သီးတလုံးမှည့်ကောင်းတဲ့ဟာကိုအစေ့ထုတ် အတွင်းသားလေးနည်းနည်းပါခြစ်ထုတ်ထားပေးပါ
01 Jun 2017 | 25,346 views မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ဘဲကင်စားကြမယ်။ စုစုပေါင်း အချိန် ၂ နာရီပဲ ကြာပါတယ်...
01 Jun 2017 | 2,646 views ချစ်ခင်ရတဲ့ မိသားစုတွေ ၊ မိတ်ဆွေတွေကို ကြက်ကုန်းဘောင် ကြော်ကြွေးရအောင် ....
01 Jun 2017 | 2,685 views ဆိုငျမှာဈေးကွီးပေးဝယျမစားပါနဲ့ ။ ကိုယျတိုငျအိမျမှာ ကွကျသားခြိုခဉျြကွျောအလှယျတကူ ကွျောစားနိုငျပါတယျ။
အနံ့အရသာနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ ဒူးရငျးသီး Pillow
26 May 2017 | 1,966 views အရင်ဆုံး ဒူးရင်းသီးအသားတွေကို ဇွန်းနဲ့ချေပါ။ ဇလုံတစ်ခုထဲကို အုန်းနို့ (ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း) ၊ နွားနို့ (ထမင်းစားပန်းကန်လုံး ၁ လုံး) ၊ ဂျုံမှုန့် (ထမင်းစားဇွန်း ၁၀ ဇွန်း) ကို ထည့်ပြီး မွှေပါ ....
အေးအေး မှေးမှေး သခှားသီးသုပျ
08 May 2017 | 2,066 views သင်္ဘောသီးသုပ်လိုပဲ စားလို့ကောင်းတဲ့ ချိုချို အေးအေး မွှေးမွှေး သခွားသီးသုပ်လေး ...
အိမျမှာအလှယျတကူကွျောစားနိုငျတဲ့ French Fries အာလူးကွျော
05 May 2017 | 3,127 views ဆိုင်တွေမှာ ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်စားရတဲ့ French Fries အာလူးကြော်လေးကို ကိုယ့်ဘာသာ အိမ်မှာကြော်စားကြည့်ရအောင်။ တကယ်အရသာရှိပြီး လုပ်ရတာလဲ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။
ကွာဇံခကျြ နှငျ့ ရှောကျသီးသုပျ
28 Apr 2017 | 1,842 views
27 Apr 2017 | 3,241 views
11 Apr 2017 | 2,366 views